Uncategorized Archives | Buspro
2021-06-06: ड्र्यागन बोट फेस्टिवल
२०२१-०5-०5: बुद्धको जन्मदिन उत्सव BY BusPro बाट
२०२०-०4-०3: ईस्टरको रमाइलो दिन
2021-03-21:जीवन को वसन्त
२०२१-०२-२6: शुभ नयाँ साल २०२१ बसप्रो बस भाडा ह Hongक Kong बाट भनाइहरू
मूल्य र फोटो
कसरी भाँडामा लिने
घटना र दिन यात्रा बस भाँडामा
विवाह बस भाडा
ह Hongक Kong एयरपोर्ट स्थानान्तरण
ह Hongक Kong पश्चिम Kowloon स्टेशन
Kai Tak क्रूज टर्मिनल
Hong Kong Macau फेरी टर्मिनल (SHEUNG WAN स्टेशन)
चीन फेरी टर्मिनल (Tsim Sha Tsui)
Hong Kong Sky-Pier
जुन 6, 2021
बसप्रो द्वारा ड्रैगन बोट फेस्टिवलको बारेमा फोटो
BUSPRO सबै सुरक्षा र शुभकामना चाहन्छ
अप्रील 3, 2021
“हेस्टर ईस्टर ..
इस्टरमा नयाँ ल्याउनुहोस्
प्रेमको आशा, आशा,
शान्ति, राम्रो स्वास्थ्य र
तपाईलाई खुशी छ र
तपाईका प्रियजनहरूलाई ..
जीवनको नवीकरणलाई अँगाल्नुहोस्। ” Abबब्ज
वसन्त theतु हो जब सबै पुनर्जीवित हुन्छन्, र सबै फूलहरू फूल्छन्। वसन्त theतु तातो मौसम हो। वसन्त सबैभन्दा सुन्दर मौसम हो।
फ्रेवुअरी 26, 2021
के तपाई नयाँ सालको शुभकामना खोज्दै हुनुहुन्छ 2021 भनाइहरू नयाँ सालको शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि। त्यसो भए, यहाँ नयाँ सालको शुभकामना संग्रहको एक राम्रा संग्रह छ 2021 भनाइहरु तपाइँको नजिक एक पटक अग्रिम बधाई दिन को लागी शुभ नयाँ साल 2021।
यो समय नयाँ जीवन को लागी ल्याउन को लागी तपाइँको जीवन को लागी सजावट को लागी समय हो। तपाईंको जीवन हजार प्रकाश ताराहरू भन्दा चम्किलो हुन सक्छ। शुभ नयाँ सालको शुभकामना …
नयाँ वर्ष प्रकट हुँदै गइरहेको छ – फूलहरू जस्तै फूलका फूलहरू भित्र घुम्न आउने सुन्दरता भित्र छिर्दछ।
चंद्र नयाँ वर्ष विगतका उपलब्धीहरू मनाउने र भविष्यको सफलताको लागि तत्पर हुने समय हो। एक सुन्दर, समृद्ध नयाँ वर्ष छ! तपाईं भगवान भाइबाट अमूल्य उपहार हुनुहुन्छ। म तपाइँलाई मेरो मुबारक चन्द्र नयाँ वर्षको शुभकामना प्रस्तुत गर्दछु। तपाई हाम्रो परिवारमा सँधै चम्किनु होस्, तपाई यस वर्ष हाम्रो परिवारको लागि आशिष्को स्रोत बन्नुहुनेछ, नयाँ वर्ष २०२१ को शुभकामना!
२०२०-०१-०3- नया सालको शुभकामना बसप्रो बस भाडा को ह Hongक Kongबाट
फ्रेवुअरी 11, 2021
नयाँ सालको शुभकामना 2021, खुशी तिर!
यो समय सबैको लागि सालको नयाँ सालको बधाई र नयाँ बर्षको लागि शुभ शब्दहरू साझा गर्ने समय हो। वसन्त महोत्सवको दौरान एक आशीर्वाद सन्देश पठाउन नबिर्सनुहोस् तपाईंको साथीहरूलाई राम्रो स्वास्थ्य र नयाँ वर्षको शुभकामना दिन। यस्तो देखिन्छ कि महामारी चाँडै अन्त हुनेछ, र हामी लापरवाह हुन सक्दैनौं। मलाई आशा छ कि सबैजना सँग फलामको गाईको आत्मा छ र एक मजबूत शरीर राख्छ।